Paris Hilton သည် NFTs အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသောသတင်းဆောင်းပါးကိုလွှင့်ပစ်သည် - Token Myanmar
Paris Hilton ကသူမသည် NFTs နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်သာမကofပြီ ၆ ရက်တွင်တင်ခဲ့သောကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှင်းပြသည့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်နည်းပညာ၏အလားအလာရှိသောအသုံးချမှုများကိုကောင်းစွာနားလည်ထားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် #NFTs! ငါထင်တာဘာကြောင့်လဲ #NFTs အနာဂတ် & သင်ဂိမ်းထဲမှာရရန်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ! https://t.co/mZHqsVqn9Z
– Paris Hilton (@ParisHilton) 21ပြီလ 7, 2021
ဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင် ပို့စ် “ NFTs နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ သင်အရမ်းသင့်တယ်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Hilton ကသူမပြောတာကသူမရဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်မှာ NFT အသိုင်းအဝိုင်းမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်“ WhaleShark ကဲ့သို့ NFT စုဆောင်းသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ Illestrater၊ အင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင် Kim Dotcom နှင့်မူလတည်ထောင်သူများဖြစ်သည်။ ”
အဆိုပါအသက် 40 နှစ်အရွယ်တစ် ဦး ရှိပါတယ် တွစ်တာ 16.9 သန်း၏အောက်ပါနှင့် 19 ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်လည်ပတ် လိုင်းများသူမ၏ရေမွှေးလိုင်းတစ်ခုတည်းကယနေ့အထိဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံကျော်ထုတ်လုပ်သည်။ သူမရေးသားခဲ့သည် –
NFTs (သို့) သဘာ ၀ မရှိသောတိုကင်များကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးသူစီးပွားရေး၏အနာဂတ်အဖြစ်မြင်သည်။ သူတို့ဟာ blockchain နည်းပညာကိုသုံးပြီးဖန်တီးသူတွေကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့နဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုမျှဝေရာမှာကူညီပေးတယ်။ ”
မကြာခဏ“ ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု” နှင့်ကိုယ်ပိုင် #bossbabe ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့်ဟီလ်တန်သည်သူမထုတ်လွှင့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သဖြင့်အနည်းဆုံးပင်မပရိသတ်အတွက်သူ့ကို NFT အာကာသထဲတွင်အခွင့်အာဏာအဖြစ်နေရာချရန်ရည်ရွယ်နေသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုတစ်စက်မကြာမီ။
လူအများအပြားကဖျော်ဖြေရေးနှင့်လူမှုဆက်သွယ်မှုအတွက်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်သူတို့၏ဘဝများကိုအွန်လိုင်းအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့စဉ်ကအဖြစ်မှန်ကြယ်ပွင့်ဟောင်းကကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအတွင်းအိမ်တွင်သီးခြားနေခြင်းသည်“ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာများ၏အရေးပါပုံနှင့် NFTs ကိုလင်းစေခဲ့သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Hilton သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတန်ဖိုးကိုမှတ်သားသည် ကို virtual reality အတွက် NFTs:
NFT များသည်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် virtual world တွင်မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုကျွန်ုပ်စတင်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်အနုပညာ၊ ဖက်ရှင်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အရုပ်သို့မဟုတ်ပြတ်သားသောဝန်းကျင်တွင်ပြသနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) အခြားကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ virtual အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စကြ ၀ Axာတွင် Axie Infinity တွင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်ကွက်ကိုးကွက်အတွက်ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto ကိုပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်လည်း virtual ကားများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ "
Hilton မှ NFTs များသည်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကို၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ပြသရန်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Cointelegraph ကြောင်းယခုအပတ်အစီရင်ခံခဲ့သည် Gucci သည် NFTs သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စဉ်းစားနေသည် နှင့်၎င်း၏ဖက်ရှင် wear tokenizing ။
Hilton သည်စစ်မှန်သောဘေ့စ်ဘောကဒ်များကို tokenizing ၏ဥပမာအားဖြင့်သူမ၏သန်းချီသောပရိသတ်များအား NFTs ၏အခြေခံအယူအဆကိုရှင်းပြရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ သူမက“ ကဒ်ပိုင်ရှင်အနေနှင့်သင်သည်ဘေ့စ်ဘောကဒ်၏စစ်မှန်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည့် blockchain တွင်လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ယခုသင်သည်၎င်းကိုအခြားအဖိုးတန်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပန်းချီဆရာများ၊ ဖြန့်ချိသူများနှင့်အေးဂျင့်များကဲ့သို့သောတံခါးစောင့်များကိုကျော်ဖြတ်နေစဉ်အနုပညာရှင်များသည်ပရိသတ်ကြီးများနှင့်ဝယ်လက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် NFT ပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးချနိုင်သောကြောင့်“ NFTs သည်အနုပညာကိုဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်သည်” ဟု Hilton ကထင်မြင်သည်။
“ #bossbabe” သည်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်များသည်ပိုမိုမျှတနိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္termsာရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးဝင်ငွေအများစုကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
“ ဒီ application အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပုံကိုပင်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအတွက်အာမခံပစ္စည်းအဖြစ် NFT များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့အတွက်ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုလား။ ”
လူမှုမီဒီယာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောင်းချခဲ့သည် ၂၀၂၀ သြဂုတ်လတွင်သူမ၏ပထမဆုံး NFT ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတိုင်မီကသူမသည်သူမ၏ကြောင်၏ပန်းချီကားအားဒေါ်လာ ၁၇၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချသော NFT တစ်ခုမပြသနိုင်ခဲ့ပါ။ သူသည်ရရှိသောငွေအားလုံးကို LA Food Bank၊ Meals On Wheels နှင့် BB4Homeless ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။